Mgbakọ Ukwu Ndịàmà Jehova nke Afọ 2022
Anyị ji obi ụtọ na-akpọ gị ka i lee vidio mgbakọ ukwu Ndịàmà Jehova nke afọ a. Ọ ga-ewe abalị atọ.
N’ihi ọrịa koronavaịrọs, anyị ga-etinye mgbakọ ukwu nke afọ a na vidio ma tinye ya na jw.org. A ga na-etinye nkebi nke ọ bụla nwayọọ nwayọọ malite na Julaị ruo n’Ọgọst.
Ị gaghị akwụ ụgwọ iji lee ya. A gaghịkwa asị gị debanye aha gị na jw.org.
Ihe Ụfọdụ A Ga-eme ná Mgbakọ A
Nnọkọ Fraịdee: Ị ga-amụta otú ịhụnanya si eme ka obi ruo mmadụ ala nakwa otú o si eme ka mmadụ na ibe ya dịrị n’udo. Ị ga-amụtakwa ihe mere ndụmọdụ Baịbụl nyere ndị di na nwunye, ndị nne na nna, nakwa ụmụaka ji bụrụ “ihe ga-eme ka udo dịrị n’ezinụlọ.”
Nnọkọ Satọdee: Mmadụ ọ̀ ga-enweli udo ná ndụ ya ma ọ na-arịa ọrịa, ma ihe na-esiri ya ike, ma e nwee ọdachi ndị na-emere onwe ha, ma ọ bụkwanụ ma nsogbu ndị ọzọ bịara ya? A ga-ele ọmarịcha vidio ga-egosi ihe ndị nọ n’ebe dị iche iche n’ụwa na-eme ka ha nwee ike ịna-enwe udo.
Nnọkọ Sọnde: Ànyị ga-abụli enyi Chineke n’eziokwu? Ọ̀ na-abụ a mụhaala mmadụ, ya na Chineke abụrụ enyi, ka è nwere ihe anyị ga-eme tupu anyị na Chineke abụrụ enyi? Ị ga-amata azịza ajụjụ ndị a ma i gee okwu si na Baịbụl isiokwu ya bụ: “Ànyị Ga-abụli Enyi Chineke?”
Ị chọọ ịhụ akwụkwọ e dere ihe niile a ga-eme ná mgbakọ ukwu a nakwa vidio kwuru gbasara mgbakọ ukwu anyị, gaa na www.jw.org/ig.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Mgbakọ Ukwu Ndịàma Jehova Na-enwe Kwa Afọ
Lee vidio Mgbakọ Ukwu Afọ 2022​—Na-achọ Udo